होशे5ERV-NE - अगुवाहरूले - Bible Gateway
होशे 4होशे 6
होशे5Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
अगुवाहरूले इस्राएल अनि यहूदालाई पाप गर्न लगाए
5 “हे पूजाहारीहरू! हे इस्राएलका कुलहरू! तथा राजाका कुल हो! मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन, किनभने न्यायको फैसला तिमीहरूको विरूद्धमा छ।
“किनभने तिमीहरू मिस्पामा पासो र ताबोरका जाल भएकाछौ।2शित्तीमका खाल्डाहरू तिनीहरूले खुब गहीरा पारेकाछन्। तर म तिनीहरू सबैलाई दण्ड दिनेछु।3म एप्रैमलाई चिन्दछु औ इस्राएल मबाट लुकेको छैन। हे एप्रैम! तैंले व्यभिचार गरिस्। इस्राएल अशुद्ध भएकोछ।4तिनीहरूका कामले तिनीहरूलाई आफ्ना परमेश्वर तिर फर्कन दिनेछैन, किनकि व्यभिचारी मन तिनीहरूको बीचमा छ र तिनीहरूले परमप्रभुलाई चिन्दैनन्।5इस्राएलको अहंकारले आफ्नै विरूद्धमा सबूत दिन्छ। यसकारण, एप्रैम र यहूदा दुवै आ-आफ्नो दोषसित ठोकिनेछन्।
6 “तिनीहरू आफ्ना ‘भेंडा़-बाख्रा’ र ‘गाई गोरू’ लिएर परमप्रभुलाई खोज्न आउँछन्, तर तिनीहरूले उहाँलाई पाउनेछैनन्। उहाँ तिनीहरूदेखि हट्नु भएको छ।7तिनीहरूले परमप्रभुको विरूद्धमा विश्वासघात गरेकाछन्। किनकि तिनीहरूले बतासे छोरा-छोरीहरू जन्माएका छन्। यसर्थ उसले तिनीहरू र तिनीहरूका जमीनहरू नष्ट पार्नेछ।
इस्राएलीहरूको पतन हुने अगमवाणी
8 “गिबामा सींङ फुक।
अनि रामामा तुरही फुक।
बेतावनमा खतराको घन्टी बजाऊ।
हे बिन्यामीन, थरथर होऊ।
9 दण्डको दिनमा एप्रैम उजाड हुनेछ।
जे कुरो निश्चय हुनेवाला छ
त्यो इस्राएलका सारा कुलहरूलाई
मैले जनाएको छु।
10 यहूदाका शासकहरू ती मानिसहरू जस्तै हुन्,
जो आफ्नो सीमा रेखा बढाउँछन्।
म मेरो रिस तिनीहरूमाथि पानी झैं खन्याउनेछु।
11 एप्रैम कष्टमा परेको छ,
मेरो न्यायमा त्यो चूर्ण भएको छ,
किनभने व्यर्थका कुरा पछि लाग्न त्यसले निश्चय गर्यो।
12 अत म एप्रैमलाई नाश पार्ने एउटा कीरा
अनि यहूदाको घरको निम्ति क्षय जस्तो हुँ।
13 जब एप्रैमले आफ्नो रोग देख्यो,
र यहूदाले आफ्ना चोट देख्यो तब एप्रैम अश्शूरकहाँ गयो,
त्यसले ठूलो राजाकहाँ मानिस पठायो।
तर त्यसले तिमीलाई निको पार्न सक्तैनँ।
न त त्यसले तिम्रो चोटलाई जाती पार्न सक्नेछ।
14 किनभने म एप्रैमका निम्ति एउटा सिंह
अनि यहूदाको घरको निम्ति एउटा सिंहको बच्चा जस्तो हुनेछु।
म आफैं तिनीहरूलाई टुक्रा-टुक्रा पार्नेछु।
म तिनीहरूलाई उठाएर लानेछु।
अनि तिनीहरूलाई बचाउँने कोही हुनेछैन।
15 जबसम्म तिनीहरूले आफ्ना अपराध,
स्वीकार गरेर मेरो उपस्थितिको खोजी गर्दैनन्,
तब सम्म म फर्केर आफ्नै ठाँउमा जानेछु।
आफ्नो कष्टमा तिनीहरूले मलाई यसो भन्दै खोज्नेछन्।”